ETLAWM MUALKUAM ZOGAM NUAM: Fwd: လူ့အရိုးတွေနဲ့ ဘုရားကျောင်း
Fwd: လူ့အရိုးတွေနဲ့ ဘုရားကျောင်း
:D ကျောချမ်းစရာကြီးဗျ လူ့အရိုးတွေ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ဘုရားကျောင်းတဲ့!!!
သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသူ တစ်ချို့ကတော့ ဒီမြင်ကွင်းဟာ အနိဌာရုံမြင်ကွင်းဖြစ်တယ်။ ကြည့်တဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်ကို ခြောက်ခြားစေတယ်။ ကြက်သီးထစေတယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ ဘုရားကျောင်းရဲ့ reception desk မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကို "ခင်ဗျား.. ဒီလိုနေရာ မျိုးမှာ နေ့တိုင်းနေရတာ ဘယ်လိုမှ မခံစားရဘူးလား။ မကြောက်ဘူးလား" လို့ မေးတဲ့အခါ. " အိုး.. ဒါတွေက သေပြီးသားသူတွေရဲ့ အရိုးတွေဘဲ.. အသက်ရှိတော့တာမှ မဟုတ်တာ။ ဘာကြောက်စရာရှိလဲ.. သူတို့က ဘယ်သူ့ကိုမှ နာကျင်အောင် မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အသက်ရှင်နေတဲ့ သူတွေကသာ ဒုက္ခပေးနိုင်တာ၊ ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ" လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြန်ဖြေပါတယ်တဲ့။